सन्दीपको ऐतिहासिक विश्व चकित हुने किर्तिमान : विश्वले भन्यो क्रिकेट बलर त यस्ता पो त ! -
सन्दीपको ऐतिहासिक विश्व चकित हुने किर्तिमान : विश्वले भन्यो क्रिकेट बलर त यस्ता पो त !
काठमाडौ । लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले सानै उमेरमा ऐतिहासिक विश्व किर्तिमान राखेका छन् । टि ट्वान्टी क्रिकेटमा एक सय विकेट पुरा गर्ने उनी पहिलो नेपाली खेलाडी बनेका छन् । शनिबार एसीसी इस्टर्न रिजन टि २० क्रिकेट प्रतियोगितामा सन्दीपले मलेसियासँग सुरुवाती विकेट लिँदै टि २० मा एक सय विकेट पुरा गरेका हुन् । यसपछि विश्वभरीका क्रिकेट प्रेमीहरुले क्रिकेट बलर त यस्ता पो त भन्दै प्रशंसा गरेका छन् । यो सानो उमेरमा सन्दीपले गरेको प्रगतीको विश्वभरी प्रसंशा भएको छ । यससँगै सन्दीपले टी-ट्वान्टीमा १०० विकेट लिने पहिलो नेपाली खेलाडीको कीर्तिमान बनाएका हुन् ।
सन्दीपले आफ्नो पहिलो ओभरमै २ विकेट लिएका हुन् । सन्दीपले पहिलो ओभरको दोस्रो बलमा भिरनदिप सिंहलाई आउट गरे । सन्दीपले करियरको सय विकेट पुरा गर्ने क्रममा नेपालबाट १८ खेलमा ३१ विकेट लिएका छन् । सन्दीपले यस सफलता ७५ खेलमा पुरा गरेका हुन् । सन्दीपले बाँकी विकेट भने विभिन्न फ्रेन्चाइज क्रिकेट लिगमा लिएका थिए ।
सन्दीपपछि वसन्त रेग्मीले ४० खेलमा ५३ विकेट लिएका छन् । क्रिकेटबाट सन्न्यास लिई सकेका शक्ति गौचनले ३१ टि ट्वान्टी खेलमा ३२ विकेट लिएका छन् । तीव्र गतिका बलर करण केसीले २७ टि ट्वान्टी खेलमा ३३ र सोमपाल कामीले ३३ खेलमा ३० विकेट लिएका छन् । सन्दिपले २०१८ मा लर्ड्समा विश्व–११ बाट वेस्टइन्डिज विरुद्ध टि ट्वान्टी आईमा डेब्यु गरेका थिए ।